Inona no anton-javatra no mifandray amin'ny ratsy PCBA ampiasaina ny SMT? - China Fastpcba Teknolojia
Inona no anton-javatra no mifandray amin'ny ratsy PCBA ampiasaina ny SMT?
Ao amin'ny fanaovana ny PCBA birao, ny SMT fikarakarana dingana Tena zava-dehibe, ary ny dingana ihany koa ny tena mety hahatonga ny kilema ny pcba birao, indrindra fa ny mandroso anivon'ny ny fitaovana, ny boky asa fomba sy ny rivotra tontolo iainana , sy ny toy izany. Ireto ambany ireto dia miresaka momba ny sasany amin'ireo lafin-javatra ratsy eo amin'ny smt dingana fikarakarana izay?
Mihoatra ny 48% ny kilema rehetra amin'ny SMT fanodinana avy amin'ny fanontam-pirinty sy ny dingana anjara lehibe eo amin'ny teknolojia ny fototra aloha-end fanontam-pirinty. 90% ny ratsy fanaovana pirinty SMT fikarakarana birao dia vokatry ny ratsy solder Mametaka fampifangaroana; Smt SJM ny orinasa fanodinana mampiditra Japana nandroso planeta centrifugal solder Mametaka mampifangaro ny teknolojia mba hamaha ny olana momba ny solder Mametaka sy ny solder Mametaka pirinty ho an'ny orinasa lehibe toy ny fitaovana elektronika sy ny optoelectronics. Vokatry ny ratsy, ka tena fanatsarana ny kalitaon'ny vokatra orinasa sy ny fahombiazan'ny asa.
Ireto manaraka ireto no mahatonga ny sarotra nateraky ny solder Mametaka nandimby nampientam-po nandritra ny fanodinana smt.
1, mahantra solder Mametaka marary mitsika ary vifotsy vovoka hitovy Tsy ampy, niteraka ratsy welding!
2, Bad solder Mametaka viscosity Tsy ampy, firapotsy vovoka marary mitsika singa volatility, mora ny handao na fametrahana fitaovana mandresy!
3, ny solder Mametaka misy rivotra ka manjary miboiboika (rivotra), solder fipoahana sy ny fasika lavaka, sns .;
Any smt fanodinana eo amin'ny dingana raha tojo PCBA olana ara-teknika, azafady mijery Shenzhen Jingbang smt orinasa fanodinana, ny tsipiriany ho anao hamaha! Tonga soa eto torohevitra: pcba06@pcb-smt.net
Post fotoana: Aug-27-2018